Dagaal xoogan iyo duqeyn dib uga bilowday Magaalada Xalab ee dalka Syria | Baydhabo Online
Dagaal xoogan iyo duqeyn dib uga bilowday Magaalada Xalab ee dalka Syria
Dagaal xoogan oo ay bar bar socoto duqeyn culus ayaa dib uga bilowday Magaalada Xalab ee dalka Syria, saacado kadib markii uu dhamaaday waqtigii Xabad joojinta ee u dhaxeysay dhinacyada isku haya dalka Syria.
Diyaaradaha dagaalka ayaa ridaya duqeymo culus oo ay ku garaacayaan goobaha fariisimada u ah Kooxaha ka soo horjeeda Dowladda, iyadoo dhinaca kale dagaalka uu yahay mid xoogan, maadaama maalmihii la soo dhaafay dhinacyada Syria aysan wax rasaas ah isku ridin.
Kooxaha Xuquuqda Aadanaha dalka Syria, ayaa sheegaya dagaalkaan inuu biloowday xalay, hugunka Madaafiicda culusna laga maqlaayo inta badan Magaalada Xalab ee dalka Syria.
Nin ku sugan Magaalada Xalab, ayaa sheegay duqeyn culus in lagu garaacay goobaha ay ku sugan yihiin Kooxaha ka soo horjeeda Dowladda, halkaasina uu ka dhashay Khaasaare xoogan.
“Tan iyo markii uu dhamaaday heshiiskii xabbad joojinta ee mudda saddex saacadood ka hor ah ilaa hadda waxaan arkayay duqeymo lala beegsanayo furimaha hore ee dagaalka, waxaan sidoo kale maqlayay dhawaqa rasaasta la is weydaarsanayo, gaar ahaanna magaalada qaybteeda qaddiimiga ah. Waxaan ka maqalnay idaacada in diyaaradaha dagaalka ay ku jiraan hawada magaalada. Ilaa haatan ma jirin duqeymo ka dhan ah dadka rayidka ah.” Ayuu yiri ruux ku sugan Magaalada Xalab.
Dad rayid ah ayaa ku sugan Magaalada Xalab ee dagaalka dib uga biloowday, waxaana jirta walaaca ku aadan dadkaasi rayidka ah inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalada iyo Duqeymaha.
Qaramada Midoobay ayaa ka fekereysa qorshe rayidka looga daad gureynaayo Magaalada Xalab, si aysan waxyeelo uga soo gaarin madaafiicda culus ee dhinacyada isku haya Magaaladaasi ay isweydaarsanayaan.